စမတ်ဖုန်းနဲ့ အထာကျကျ ဓာတ်ပုံရိုက်နည်း – DigitalTimes.com.mm
စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ quality ကောင်းလာတာနဲ့အမျှ ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေလည်း တဖြည်းဖြည်းအရှိန်မြင့်လာပါပြီ။ point-and-shoot ကင်မရာတွေအစား ဟန်းဆက်တွေနေရာယူလာကြပါပြီ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူတွေအတွက်တော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ များလွန်းလှတဲ့ပုံတွေရိုက်ကြမှာပါပဲ။ ဒီလိုလူလေးတွေအတွက် ရိုက်မယ့်ရိုက်ပုံကောင်းကောင်းထွက်အောင် အထာကျကျဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဓာတ်ပုံတွေ snap တွေရိုက်ရင်း ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနည်းပညာကိုတိုးတက်အောင် စမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်.
ကင်မရာကို အပေါ်စီးကနေ ရိုက်တာက လူကိုပိုပြားစေတဲ့ပုံပေါက်ပြီး မေးနှစ်ထပ်တွေ ပခုံးမြင့်မြင့်ကြီးမပေါ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ angle တစ်ခုပါ။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်က အပေါ်စီးမှာရောက်နေတဲ့အချိန် ကိုယ့်အောက်အဝေးမှာရှိနေတဲ့ရှုခင်းမြင်ကွင်းတွေကို ရိုက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အဆင်အပြေဆုံး angle ပါ။
၂. Shutter speed ကို အပြောင်းအလဲလုပ်ကြည့်ပါ။
ဒါက လူတော်တော်များများသိပ်မလုပ်ကြတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။ shutter speed လေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ လုံးဝကွဲပြားတဲ့ပုံတွေထွက်ပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံမှာ shutter speed ဘယ်လိုသက်ရောက်ပုံကိုပြောပြပါမယ်။
Shutter speed ဆိုကတည်းက ကိုယ့်ကင်မရာ sensor က ဘယ်လောက်ကြာကြာပွင့်မလဲဆိုတဲ့အချိန်ပါ။ shutter speed ပိုမြန်လေလေ ပိုကြည်လင်လေလေ အသေးစိတ်ပိုထွက်လေလေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ISO ကိုလည်း သွားမြှင့်ဖို့တော့လိုပါလိ့မ်မယ်။
Shutter speed ကိုနှိမ့်လိုက်တာက ပုံထွက်ပိုချောမွေ့ပြီးတော့ noise လည်းနည်းပေမယ့် ဂရုစိုက်တော့ရိုက်ပေးရပါတယ်။ shutter နည်းရင်ကျတော့ ပုံတွေကနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ ဝါးသွားတဲ့အတွက် သုံးချောင်းထောက် ဒါမှမဟုတ် လက်ကိုသေချာငြိမ်အောင် ကိုင်နိုင်မှအဆင်ပြေပါမယ်။
၃. Rule of thirds
ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ယူပုံယူနည်းတကယ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာဘာလေးပါအောင်ရိုက်မယ် ဘယ်လိုယူမယ် စတာတွေက ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ main ပါ။ အဆင့်မြင့်တဲ့ နေရာအထားအသိုပေါင်းများစွာထဲကမှ အလုပ်အဖြစ်ဆုံး အခြေခံအကျဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ “Rule of thirds” ပါ။
နည်းလမ်းကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဒေါင်လိုက်ပဲရိုက်ရိုက် အလျားလိုက်ပဲရိုက်ရိုက် frame ကို ၃ပိုင်းပိုင်းကြည့်ပါ။ ပုံမှာ virtual ထောင့်မှန်ပုံစံလေးတွေ ချကြည့်ပြီး ကိုယ်အဓိကထားရိုက်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကို အလယ်လိုင်းထောင့်တစ်ဖက်မှာထားရိုက်ပါ။ ဒါဆို effect သုံးထားသလိုတောင် ထင်ရစေမယ့်ပုံတွေထွက်နိုင်ပေမယ့် ဂရုစိုက်မရိုက်ရင်တော့ တခြားနေရာတွေမှာ dead space တွေ ပါတတ်ပါတယ်။
၄. ISO ကိုပြန်ညှိပါ။
ISO ဆိုတာကတော့ ဓာတ်ပုံပညာမှာ အရေးပါတဲ့ term တစ်ခုဖြစ်ပြီး တော်တော်လေးလည်း လွယ်ကူတဲ့သဘောတရားလေးပါပဲ။ ကိုယ့် sensor ရဲ့အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး ISO နည်းလေလေ ပိုတောက်ပကြည်လင်တဲ့ပုံတွေရလေလေပါပဲ။
ISO များရင်တော့ ပုံတွေပိုလင်းပေမယ့် အသေးစိတ်အရောင်တွေတော့မထွက်တတ်ပါဘူး။ ISO မြှင့်ထားရင် shutter speed ကိုမြန်အောင်ထားလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။
၅. Panorama နဲ့ရိုက်ပါ။
အရမ်းကြီးတဲ့ပုံကြီးတွေရိုက်ဖူးပါသလား? အရင်လို ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ရှုခင်းတွေအကုန်ဆံ့မယ့်နေရာထိ အဝေးကြီးသွားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ခေတ်ပေါ်စမတ်ဖုန်းတော်တော်များများမှာ panorama ရိုက်လို့ရနေကြပါပြီ။ panorama ဆိုတာကပုံတွေအများကြီးကိုတစ်ပုံတည်းအနေနဲ့တွဲပြီးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး အရင်ကတော့ ဒီလိုစပ်ဖို့တော်တော်အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့စမတ်ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေနဲ့တင် အားလုံးလုပ်လို့ရနေပါပြီ။
HDR ကို ပရိုတစ်ယောက်လိုရိုက်နိုင်ဖို့ အရင်ကတော့ တစ်ပုံတည်းကိုပဲ shutter speed အမျိုးမျိုးနဲ့ရိုက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ထဲမှာထည့်ပြီး အလင်းရောင်ကိုကိုယ်တိုင်ညှိရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ခေတ်ပေါ်ဖုန်းတွေက ကိုယ်တိုင်ဘာမှလုပ်စရာမလို camera setting မှာ ဝင်ရွေးလိုက်ရင်ကို အိုခေနေပါပြီ။
သူကတော့ အလင်းမှာ contrast တွေအရမ်းများတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ရိုက်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ နောက်ခံကောင်းကင်အရောင်လင်းနေတဲ့အချိန် အရှေ့ကအရာဝတ္ထုကမှောင်နေတယ်ဆိုရင် HDR mode သုံးသင့်ပါတယ်။
18:9 Screen , Dual Camera များပါတဲ့ Xiaomi Redmi Note5ရဲ့ ဓါတ်ပုံထွက်ပေါ်လာ
Xiaomi Redmi5Plus ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း